I-Cotton Linen I-Oversized Shirt Iingubo - i-Buddhatrends
$60.20 $86.00 Ugcina i30% ($25.80)
I-Cotton Linen i-Oversized Shirt Iingubo yengubo yesitayela sevintage kubasetyhini abanjengevini abava ngayo kwi-wardrobe yabo. Kufanelekile ukuba igqoke kwiimozulu ezahlukeneyo kubandakanya ukufudumala kwesimo sezulu. Iyakwazi ukugqithwa ngokukhawuleza kunye nabahlobo okanye xa ufuna ukuthenga ukutya kunye nokunye.
I-Cotton Linen i-Oversized Shirt Iingubo zenziwe ngekotoni kunye neelinen kunye neprojekthi eqinile. Yenziwe nge-classy O-intamo kunye nesitayela esihambayo samahhala. inokugqithiselwa kwiziganeko ezingaqhelekanga kunye nokuphuma kunye nabahlobo. Isitayela sayo esifanelekileyo senza ukuba kukhululeke kakhulu kubafazi abahlukeneyo nobukhulu. Isitayela salo sobune-calf senza ukuba kulungele ukuphuma apho kufuneka uhlale usebenza khona. Kananjalo ineemikhono ezinde ezingagqitywa ukunika inkululeko ethe xaxa kunye nendawo.
Kufumaneka ngobukhulu obufanayo kunye nemibala emibini: obomvu nomhlophe.
ubude: Ubude beKnee
Ubuninzi bobukhulu: Iqabetho: 85cm, IBust: 152cm, i-Sleeve: 28cm, i-Cuff: 26cm, Ubude: 120cm
I-Corduroy yeGreen ngokubanzi
I-Corduroy yeGreen ngokubanzi $89.00
I-Loose Turtleneck Sweater Dress $50.40 $72.00